I-THE PLAYHOUSE ISONGA UNYAKA NGOBUMNANDI BODWA – Bayede News
I-THE PLAYHOUSE ISONGA UNYAKA NGOBUMNANDI BODWA
IDurban Playhouse Company isonga unyaka wezi-2019
IDurban Playhouse Company isonga unyaka wezi-2019 ngemibukiso yenjabulo eza kubabukeli ibelethene. Abathandi bezobuciko bazozitika ngomdanso weballet olungele umndeni wonke; ikhonsathi lejazz eliphethe abaculi abaphezulu nelingenakukuphuthela nangengozi, amahlaya alethwa kuwe ngomdlalo weshashalazi; wumculo onamahlaya olethwa kuwe wusomahlaya osezuze imiklomelo uClinton Marius nomdlalo weshashalazi olungele izingane okhuluma ngempilo yezilwane zasendle e-Afrika.
Uyobe ukhona nomculo ongumshonisalanga (Sundowner Concerts) oyobe umahhala kuhlangene nomgubho wosuku lukaKhisimusi, A Christmas Celebration oluyokuza kuwe ngamaculo ajwayeleke ngalesi sikhathi sonyaka siwaphiwa ngamaciko ahlukehlukene ehambisana neKZN Philharmonic Orchestra etheatre complex esenkabeni yeTheku.
“Iqondiswa wuRalph Lawson noLuyanda Sidiya ekhangisa ngomdanso, i-A Christmas Celebration iwumbukiso okhangayo nokuyiwona omumethe umongo wesikhathi samaholide kaKhisimusi.Nngokusho kukaLinda Bukhosini oyiChief Executive Officer noMqondisi Wezobuciko eThe Playhouse Company lo nyaka – ke awuzokwehluka ngalutho kweminye uma kuziwa ekuletheni injabulo kubantu ngesikhathi samaholide.
“Nakulokhu i-The Playhouse Company izolethela abathandi bezobuciko injabulo ethe xaxa nelungele umuntu ngamunye ngokwethula i-Okwethu Community Arts Festival yaminyaka yonke nosekungokwesibili lokhu kwenzeka eNingizimu yeKwaZulu Natal. Phela, lolu wuhlelo lwe-The Playhouse lapho yelula khona isandla ilethe injabulo ibe ihlwaya futhi ithuthukisa ithalente lentsha ngokuyilandela emiphakathini ephila kuyo. Le njabulo eyingxubevange yezikaqedisizungu iyobe ise-Uyongo Town Hall ngoZibandlela ziyisi-6 kuthi ngakusasa ziyisi-7 igudlukele eKokstad Youth Centre,” kusho uLinda.
Lo mbukiso otshengisa ubuciko obehlukene entsheni yendawo wabanjwa okokuqala ngowezi-2018 eMlaza kanti iThe Playhouse Company inenhloso yokuwuyisa ezindaweni ezehlukene njalo ngoZibandlela ugcine ufinyelele kumagumbi womane esifundazwe iKwaZulu-Natal.
“Ngeshwa umdlalo ohambisana nomculo weDisney iThe Beauty and the Beast nophekwe yiThe Playhouse Company nobulindelwe ngabomvu ukuthi ufolose emibukisweni yangamaholide uhlehiselwe isikhathi ersingakaziwa okwamanje. Lo mdlalo uqondiswa wuRalph Lawson, kudansa u-Adele Bank”, kuchaza uLinda oqhubeke wathi kube ngenxa yezimo ezingaphezu kwamandla abo ukuthi lo mdlalo ohambisana nomculo nothandwa ngohlobo olumangalisayo bagcine bephoqekile ukuthi bawuhlehlise kulokhu.Nokho uLinda uphethe ngezindaba ezimnandi zokuthi lo mdlalo ososelwe kwingqayi eyahlomula ngomklomelo we-Oscar ngowe-1991 uzobuya nakanjani ekupheleni konyaka ozayo wezi-2020.
Uhla olulandelayo olochungechunge lwemibukiso yezobuciko elethwa yiThe Playhouse Company, eyingxenye yoMnyango Wezobuciko namaSiko neqhakambisa umgomo kahulumeni wokuhlanganisa imiphakathi (social cohesion) nokwakha isizwe (nation building):
(26 kuLwezi – 7 kuZibandlela ePlayhouse Grand Foyer)
Ubuciko bokuxoxa indaba kungumkhuba oqhakanjiswa kakhulu ngabomdabu base-Afrika kanti uGcina Mhlophe (osesithombeni) oyiciko laseThekwini elimakhono maningi eliklonyeliswe liphindelela nelaziwa umhlaba wonke ungomunye wabesifazane abavelele kulo mkhakha wobuciko okugcwele kuwo abesilisa.
Kuyiqholo nokuziqhenya ukuthi iThe Playhouse Company imememezele ukwethulwa kwendaba kaMhlophe ekitazayo iFudukazi’s Magic esuselwe encwadini yezingane edumile nebizwa ngaso lesi sihloko. UMhlophe uyena obhale waqondisa kanti futhi uyingxenye yawo lo mdlalo wabancane bayo yonke iminyaka
Indaba iFudukazi’s Magic yenzeka esikhotheni ezwenikazi i-Afrika inabaculi-balingisi abathathu (uMhlophe ehambisana noKhwezi Becker noNkosingiphile Mpanza) nabaculi ababili (okungoVictor Sithole noNjabulo Shabalala). Baxoxa indaba yofudu lwesifazane oluthi lusaxoxa nezinye izilwane esikhotheni lusebenzise umlingo walo ukuguqula lezo zilwane ezingabukeki kahle ngokuzithakela imibala yothingo lwenkosazane kwezikwembethe.
UGcina Mhlophe ungumbhali, umhayi wezinkondlo, umbhali wemidlalo, umqondisi nomethuli okhono lakhe lokuxoxa indaba walincela ezindabeni ayezixoxelwa ngumama wakhe esemncane.
Ithalente likaMhlophe lokubhala nokuxoxa indaba selimhambise emazweni afana neNingizimu neNyakatho yeMelika, e-Yurophu, eGreenland naseJapan kanti neNingizimu Afrika useyizungeze yonke. Usegibele ezinkundleni ezibatshazwa umhlaba wonke njengeRoyal Albert Hall eseLondon neKennedy Centre ese-America. Usehlonishwe ngeziqu zobudokotela yiLondon Open University (UK), I-University of KwaZulu-Natal, iPretoria University neFort Hare. Wonke lawa mayunivesithi abehlonipha umsebenzi okhiqizwe yizandla zakhe nowenze lukhulu ekukhuliseni ulwazi olufundwa phansi nokugcina ubuciko bokuxoxwa kwendaba ngendlela yase- Afrika.
Umbukiso iFudukazi’s Magic izokhonjiswa njalo ngele-10 ekuseni kusuka ngoLwesibili kuya koLwesihlanu, ngoLwezi zingama-26 kuya zingama-30; bese kuba ntambama ngelesi-2 nsukuzonke kusukela ngoLwesibili kuya kuMgqibelo zi-3 kuya ziyisi-7 kuZibandlela.
Amathikithi abiza ama-R50 uma ethengwe ngaphambi kwesikhathi kanti emnyango abiza ama-R65. Bhuka eBox Office ngokushayela inombolo (031) 3699 596/40 noma uthenge online kwaPick N Pay Webtickets (uma unemibuzo ungashayela inombolo: 086 111 0005)
6-8 kuZibandlela ePlayhouse Opera Theatre)
IThe Playhouse iletha kuwe lo mdanso weballet olungele abantu bawo wonke amazinga okukhula ngokubambisana neCape Town City Ballet. Lo mdanso uhlanganiswe wusaziwayo onguVeronica Paeper kanti amalambu esteji alawulwa wuWillem Disbergen
Lo mbukiso ongubukhazikhazi, onabadansi abangama-40 uxoxa indaba yomdodovu weqonqela elinenhliziyo embi u-Ebenezer Scrooge, othola ithuba elingandele bani lokubhekisisa ngeso elibanzi izindlela zakhe ezimbi aguquke abe ngumuntu onenhliziyo enhle nozwelo kwabanye abantu. Lokhu kwenzeka emva kokuvakashelwa kwakhe yisipoki sikaKhisimusi owedlule, wamanje nowangenkathi ezayo ngosuku olwandulela uKhisimusi nolubanda ngendlela eyisimanga.
A Christmas Carol: The Story of Scrooge ngomunye wemibukiso yeballet engaphezu kwama-40, Phakathi kwayo okuneyi-16 eyimisebenzi ephelele okudansa kuyo uPaeper owazalelwa ePort Shepstone noselokhu aba kule ndima yomdanso kusukela ngowe-1972.
Umbukiso uqala ligamenxe elesi-7 ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ziyisi-6 nesi-7 kuZibandlela; nangelesi-3 ngeSonto ziyisi-8 kuZibandlela.
Amathikithi e-A Christmas Carol: The Story of Scrooge abiza i-R150, iR180 nama-R220. Angathengwa e-The Playhouse Box Office ngokushayela inombolo (031) 3699 596/40 noma athengwe online kwaPick N Pay Webtickets (uma unemibuzo ungashayela inombolo: 086 111 0005)
6-15 kuZibandlela ePlayhouse Loft)
I-The Playhouse Company ibambisene neMoving Acts Production, ikwethulela umdlalo weshashalazi ophethe umculo namahlaya owulethelwa nguClinton Marius ngalo mdlalo okulethela umdlalo wama-25 okhiqizwe yisandla sakhe. Umqondisi womdlalo wuTony Kgoroge wodumo lwe-Invictus okuyingqayi kaClint Eastwood, nalapho ayelingisa khona uWalter Sisulu kwingqayi I-Mandela: Long Walk to Freedom.
Lo mdlalo ugqamisa ubeke obala ikhono labadlali baseThekwini abadume eshashalazini nakuthelevishini okungoBongani Mbatha, uBhekani Tshabalala noMduduzi Nombela uxoxa ngabangane abathathu abanemizimba eqatha nabanenkinga yokugcina ubudlelwano bezothando. Ukuze bajabulise abathandana nabo bazincisha ukudla bese kuthi ngokuhamba kwesikhathi baziqonde kabanzi nobuwula babo bokungazithatheli phezulu bona luqobo.
“Wumdlalo othakwe ngomculo nomdanso nendikimba enamahlaya kodwa futhi ube uqhakambisa ubuhlungu obubhekana nabantu abalwisana nesisindo somzimba,” kuchaza uMarius phakathi kwemidlalo yakhe ebe yimpumelelo okungabalulwa iLollipop Lane eyaba ngumdlalo owuchungechunge kuLotus FM neminye yeshashalazi okuyiSweetie Darling (kulingisa uBongani Mbatha), B!#ch Stole My Doek neWhite Christmas.
“Umdlalo uqondiswe kakhulu kubantu abawujabulelayo umdlalo onamahlaya angathinti izihloko ezijule kakhulu. Ababukeli abakhonze nabalandela laba balingisi abathathu kanye nabantu abanenkinga yesisindo somzimba nabanokuzenyeza angingabazi ukuthi bazozizwa besekhaya,” kusho uMarius
Umdlalo iBigly Yuge uqala ngelesi-7 kusihlwa ziyis-6 kuZibandlela; Ngelesi-2 nelesi-7ntambama ziyisi-7 kuZibandlela; ngelesi- 3ntambama ziyisi-8 kuZibandlela; Ngelesi-7 kusihlwa ziyi-11, 12, 13 kuZibandlela; Ngelesi-7 kusihlwa ziyi-14 kuZibandlela nangelesi-3 ntambama ziyi-15 kuZibandlela.
Amathikithi abiza i-R100 lilinye. Angathengwa e-The Playhouse Box Office ngokushayela inombolo (031) 3699 596/40 noma athengwe online kwaPick N Pay Webtickets (uma unemibuzo ungashayela inombolo: 086 111 0005)